Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 9-14-21 - iHorror
Mbido Ihe nkiri egwu Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 9-14-21
Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 9-14-21
by James Jay Edwards September 14, 2021 175 echiche
Ndewo Tightwads! Ọ bụ Tuesday ọzọ, nke ahụ pụtara ihe nkiri efu sitere na Tightwad Terror Tuesday! Boo!
Abalị nke ndị mmụọ ọjọọ (1988), site n'ikike International Marketing Marketing.
Abalị nke Ndị Mmụọ Ọjọọ
Abalị nke Ndị Mmụọ Ọjọọ bụ maka nwa agbọghọ a jụrụ ajụ nke na -eme oriri na abalị Halloween, ụmụaka niile a ma ama na -apụta na ya n'ihi na oriri a na -eme n'ụlọ ebe a na -edebe ozu. N'ezie, a na -akpọ ndị mmụọ ọjọọ, ndị na -eto eto na -anwụkwa.
Ebee ka esi amalite na nke a? Ọ nwere otu ihe nkiri kachasị echefu echefu na ọrụ eze nwanyị Linnea Quigley, nke gụnyere tube nke egbugbere ọnụ na akụkụ ahụ chiri anya. Ọ na -enwekwa ihe mkpuchi na -enweghị isi nke na -enweghị ihe jikọrọ ya na isi akụkọ. Tinye ụfọdụ ihe ngosi kredit mmeghe mara mma, ị nwetakwara mmeri. Abalị nke Ndị Mmụọ Ọjọọ bụ remade na 2009, ma ị nwere ike ịhụ ihe mbụ 1988 kpochapụwo Ebe a na ShoutFactoryTV.
Grizzly (1976), site n'ikike Film Ventures International (FVI).
N’oge na-adịghị anya
Na afọ ndị na-esonụ jaws, O yiri ka obere ụlọ ihe nkiri ọ bụla dị na Hollywood mere nwoke na anụ ọhịa anụ ọhịa ka ọ bụrụ ego, ma ọ bụ nke 1976 N’oge na-adịghị anya guzo dị ka otu n'ime ihe kachasị mma. Ihe nkiri a mara mma nke-iti-ihe nke jaws, Dochie azu shark na bear na oke osimiri na oke ohia - N’oge na-adịghị anyaAkwụkwọ ozi ya turu ọnụ na anụ ọhịa bea ahụ nwere “Jaws ndị kasị dị ize ndụ n’ala a.”
Onye nduzi William Girdler (onye mekwara ya Ofbọchị nke ụmụ anụmanụ na Onye Manitou), N’oge na-adịghị anya na - enweta otuto ọzọ maka iji ezigbo bea na ihe nkiri na - enweghị ndị na - eme ihe nkiri - o doro anya, maka ihe nchekwa, ihe nkiri ndị ahụ na ndị na - eme ihe nkiri jiri otu nwa okorobịa (nke doro anya) kweta. A pụrụ ịhụ ihe nkiri anụ ọhịa a na-atọ ụtọ Ebe a na Tubi TV.
Battle Royale (2000), site n'ikike Anchor Bay Films.
agha Royale bụ maka klaasị ụmụ akwụkwọ Japan nke a na -akpọga n'agwaetiti a gbahapụrụ agbahapụ ma nye ya ngwa agha na ntuziaka maka ịlụ ọgụ ruo mgbe ọ fọdụrụ naanị otu onye fọdụrụ. Yabụ ee, ọ bụ isi Agụụ na Games, ma laghachi azụ na 2000.
Obi ojoo na apocalyptic, Agha eze kwesịrị n'ezie-ewere dị oké mkpa ikiri, karịsịa maka Fans nke Egwuregwu Kasị Egwu-akpata flicks. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ gị, nye ya anya dị mma Ebe a na Vudu.
Obodo (2004), site n'ikike Buena Vista Pictures.
The Village bụ mpempe oge gbasara obodo dịpụrụ adịpụ nke dị n'etiti oke osisi Pennsylvania. Ndị bi ebe ahụ nwere nghọta na nnukwu anụ ndị bi n'ọhịa - ha na -anọ n'ime obodo ha, nnukwu anụ mmiri ga -ahapụkwa ha. A na -agbagha nkwekọrịta ahụ mgbe otu n'ime ndị obodo kpebiri ịchọ ọgwụ sitere n'otu obodo dị nso nke ha kwenyere na ọ gafere ọhịa (mana ọ nweghị onye ọ bụla garala).
Afọ 2004 M. Night Shyamalan tụgharịrị ka ahapụpụtara ya, mana ọ na -enwe oke ịtụnanya taa. Ka ọ na -erule oge ọrụ ya, Shyamalan bụ ụlọ nwere ike, yabụ ejiri aha dị ka Sigourney Weaver, Bryce Dallas Howard, William Hurt, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, Michael Pitt, Jesse Eisenberg, Judy Greer, na Brendan Gleeson. Ee, ee, enwere ntụgharị Shyamalanian. Chọta The Village Ebe a na TubiTV.
Oge Ikpeazụ na Mars (2013), site n'ikike Magnet Releasing.
Oge Ikpeazụ na Mars
Dịka aha ahụ na-atụ aro, Oge Ikpeazụ na Mars bụ ihe dị ka ụbọchị ikpeazụ nke njem mmụta sayensị na mbara ala Mars. Mgbe ị na-akwado ịla n'ụlọ, otu n'ime ndị sayensị kwenyere na ọ chọtala ihe akaebe nke ndụ, wee pụọ ịnakọta ọtụtụ ihe atụ. Ọ na-efu, otu na otu, ya mere ndị ọzọ nke otu ahụ. Ndị fọdụrụ ga-ekpebi ma ha ga-anwa ịchọta ndị ọrụ ibe ha, ma ọ bụ naanị ịchekwa onwe ha ma laa n'ụlọ na-enweghị ha.
Oge Ikpeazụ na Mars a ọkọlọtọ nke dịpụrụ adịpụ ohere nkiri tinyere nke Ọnwa or The Martian, ma gbakwunyere daashi nke ekwe omume Martian nnukwu anụ. Ihe nkiri a dị egwu gụnyere Liev Schreiber, Romola Garai, Olivia Williams, Elias Koteas, Johnny Harris, Goran Kostic, Tom Cullen, na Yusra Warsama. Nweta Oge Ikpeazụ na Mars Ebe a na Crackle.